Ndingayivula njani iAkhawunti yeShishini lePinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Kuqhelekile ukuba abantu bafune ukuba neakhawunti yePinterest yabo ukuze banike umbono ongcono kuyo yonke into abayenzayo ngaphakathi kweqonga. Oko kukuthi, ukuthatha imibono yokuhombisa okanye ukwazisa iiprojekthi zakho ngokukodwa njengendlela yothungelwano.
Nangona kunjalo, iinkampani ezinkulu nazo zinethuba lokwenza njalo Yenza elakho iphepha kwiPinterest enika isibonelelo esikhulu ngakumbi kumbono wokunxibelelana nabasebenzisi. Yonke into iya kuba sezandleni zabo baphatha indawo yentengiso yenkampani okanye umntu olawula iinethiwekhi.
Ukuba inkampani ifuna ukubandakanya uninzi lweenkampani, zinokuthi zenziwe ngezimvo ezichanekileyo zokufumana inzuzo enkulu. Ukusuka apho banokujonga kwangaphambili ukuba bafuna ntoni kwaye khangela abasebenzisi okanye abathengi kwaye ufumane abathengi abanokubakho bemveliso okanye iinkonzo.
Amanyathelo okuvula iakhawunti yeshishini kwiPinterest
Njengawo onke amaphepha, IPinterest idale icandelo elinikezelwe kwiinkampani enika la macandelo ithuba lokuzenzela ezabo izimvo zentengiso eqongeni. Ngokuqinisekileyo ngumbono omangalisayo onika abantu amandla okufikelela kwiimveliso zokwenyani ngonqakrazo lweqhosha.
IPinterest iphucule amandla ayo okudibanisa abantu ngaphandle kokuthatha amanyathelo amaninzi kwiphepha. Kodwa enyanisweni, yonke into kuya kuxhomekeka kwindlela nganye yeenkampani ezihamba ngayo zonxibelelwano.
Uyivula njani iakhawunti yeshishini kwiPinterest?
Vala ukungena kweakhawunti yakho
Khangela: "Iseshoni yeeakhawunti zeshishini kwiPinterest"
Beka idatha eceliweyo ngaphakathi kweqonga
Ungalibali ukongeza: iwebhusayithi yakho ukwenza ikhonkco, ilizwe apho ikhoyo inkampani, ulwimi lokunxibelelana neqonga.
Emva koko kufuneka wamkele iimeko kwaye ucofe iphepha elilandelayo kwiphepha
Gxila kwishishini lakho kwindawo enye kwaye kufuneka ulinike ukwamkela
Unokubeka ukuba ufuna ukukhuthaza iimveliso okanye iinkonzo
Okokugqibela unokwenza ipini okanye uqondise ngokulula kwiakhawunti yeshishini
Enye yezinto eya kukunceda udibanise kwiphepha ngokwalo kukukwazi ukunxibelelana noluntu ngokwenza izikhonkwane. Ngokungathandabuzekiyo ezinye zezinto ezinciphisa umgama kwinto efunwa luluntu.
Kutheni iakhawunti yeshishini kwiPinterest ibalulekile?
Ukwenza iphepha lePinterest libe ngcono, kubaluleke kakhulu ukuba kukho ukuqinisekiswa kweenkampani. Oku ngokungathandabuzekiyo kunciphisa ukubakho kobuqhetseba ngaphakathi kwewebhu kwaye ke kubonise ulwazi oluthile.
Namhlanje, amaphepha angenza ukuba upapasho lwabo ludibanise nokwenyusa ukufikelela kolunye uluhlu. Nangona kunjalo, onke la manyathelo kufuneka enziwe ngokuchanekileyo kwaye ngokuqinisekileyo kunesihloko esichaziweyo.
Ngenxa yako konke oku, ukwenza iakhawunti yePinterest kunokuzisa ezona zinto zilungileyo kuzo zonke iinkalo zonxibelelwano ukufumana ukufikelela okukhulu kwintengiso, nokuba ngabaphi na abaphulaphuli.
1 Amanyathelo okuvula iakhawunti yeshishini kwiPinterest
1.1 Uyivula njani iakhawunti yeshishini kwiPinterest?
2 Kutheni iakhawunti yeshishini kwiPinterest ibalulekile?